Ime ka ikpe ahụ maka WordPress na ụlọ ọrụ: Uru na ọghọm | Martech Zone
WordPress.org na-eto eto na ụlọ ọrụ ahụ, nke eji ya na ụlọ ọrụ ọ bụla ugbu a. O di nwute, nnukwu ulo oru ka na-agabiga WordPress n'ihi aha ya dika obere ulo oru ma obu ebe ntinye ederede nke onwe. Na-adịbeghị anya, raara onwe ya nye WordPress jisiri Bochum nyiwe amalitela. Anyị kwagara Flywheel n'ihi na Martech Zone enwewo obi uto na nsonaazụ ya.
Enwere uru na ọghọm nke itinye WordPress n'ọrụ. Aga m eji ahụmịhe WordPress tụnyere ịgba ọsọ. Have nwere ụgbọ ala (WordPress), ọkwọ ụgbọala (ndị ọrụ gị), injin gị (isiokwu na plugins), yana ịgba ọsọ gị (akụrụngwa gị). Ọ bụrụ na otu n’ime ihe ndị a efunahụ, ị ​​ga-agba ọsọ ahụ. Anyị elelela ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu anya na mbugharị na ụta WordPress; ma, anyị enwetụbeghị ụdị nsogbu ahụ WordPress.
Uru nke WordPress maka Enterprise
ọzụzụ - Ọ bụrụ n’ịchọrọ enyemaka ọ bụla, WordPress.org nwere ọtụtụ akụrụngwa, Youtube nwere ọtụtụ vidiyo, enwere mmemme ọzụzụ na websaịtị, Google rụpụtara ọtụtụ nde edemede. Ọ bụghị banyere nke anyị Isiokwu WordPress, n'ezie.
Ala nke iji - Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị mfe na mbụ maka ịhazi ya, maka imepụta ọdịnaya WordPress bụ snap. Onye nchịkọta akụkọ ha siri ike (ọ bụ ezie na ọ na-ewute m na isi H1, h2, na H3 na isi okwu na isi ya abanyebeghị ya na koodu ahụ).
Ohere inweta akụrụngwa - forchọ ihe ndị ọzọ mmepe CMS nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu, mana WordPress nọ ebe niile. Wardọ aka na ntị: Nke ahụ nwekwara ike ịbụ nsogbu… enwere ọtụtụ ndị mmepe na ụlọ ọrụ ndị na-emepe azịza dara ogbenye maka WordPress.
Mmekọrịta - Ọ bụrụ na ị na-achọ itinye ụdị ma ọ bụ jikọta ihe ọ bụla, ị ga-ahụ ụzọ mejupụtara nke mbụ na WordPress. Mee ọchụchọ nke ndekọ ngwa mgbakwunye ikike ma ọ bụ saịtị dị ka Usoro Canyon, enweghi otutu ihe ichoghi!
customization - Okwu WordPress, plugins, wijetị, na ụdị post post na-enye mgbanwe na-enweghị njedebe. WordPress na-arụ ọrụ ike iji nwee a usoro API nke ahụ metụtara akụkụ niile nke ikpo okwu.
Ọghọm nke WordPress maka Enterprise
Optimization - WordPress bụ mma site na igbe mgbe á »na-abá» ‹a search engine njikará» ‹cha, ma á» bá »not ghá» ‹ukwuu. Ha etinyebeghị saịtị map ha na nso nso a Jetpack ngwa mgbakwunye, ma ọ bụghị dị ka siri ike dị ka Ihe ntinye nke SEO nke Yoast.
Performance - WordPress enweghị nchekwa data njikarịcha na ibe mkpuchi, mana ị nwere ike ịme nke a ngwa ngwa site na iji njikwa WordPress. M ga-achọ ihe ngwọta ọ bụla iji nwee nkwado ndabere na mpaghara, caching peeji, ngwaọrụ nchekwa data, ndekọ njehie na usoro iji mezuo nke ọma gị.
Mmekọrịta ụwa (I18N) - WordPress akwụkwọ otu esi eme ka gburugburu gị na plugins dị na ụwa, mana enweghị ike ịmekọrịta ọdịnaya a metụtara na sistemụ ahụ. Anyị emejuputa atumatu WPML n'ihi na nke a ma nwee ihe ịga nke ọma.
Security - Mgbe ị na-ike 25% nke web, ị bụ nnukwu ebumnuche maka hacking. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime Bochum jisiri na-enye ngwa mgbakwunye akpaaka na mmelite isiokwu mgbe nsogbu nchekwa bilitere. Aga m akwado ịkwado isiokwu ụmụaka ka ị nwee ike ịga n'ihu na-emelite isiokwu nne na nna gị kwadoro iji zere itinye saịtị gị n'ihe egwu na isiokwu enweghị ike imelite.
Ntọala koodu - A na - emepekarị eserese maka imepụta nnukwu ihe, mana enweghi mmepe ọkaibe maka ọsọ, njikarịcha na nhazi. O nwere ike ịbụ ihe na-eme ka ọ ghara imezi ngwa mgbakwunye abụọ na isiokwu ya. Anyị na-ahụkarị onwe anyị ka anyị na-edegharị arụmọrụ na gburugburu (ihe ọzọ mere eji eji isiokwu ụmụaka).
backups - WordPress na-enye azịza akwụ ụgwọ, VaultPress maka nkwado ndabere na mpaghara mana ọ na-eju m anya na ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị achọpụta na ọ bụghị akụkụ si na igbe ahụ ma ọ dị mkpa ka onye ọbịa gị ma ọ bụ ọrụ ọzọ nye ya.
WordPress na-aga n'ihu site na azụmaahịa na ọkara na nnukwu, lee ụfọdụ stats si arụsị.
Tags: enterpriseenterprise wordpressWordPresswordpress conswordpress Uruwordpress Uru na ọghọm
Pantheon: Oké WordPress ma ọ bụ Drupal Bochum na New Relic
Ntuziaka Ntuziaka Ndimita Ntọala Na-abawanye Ọnụ Nchigharị